Danbiiluhu maku badbaadayaa baarlamaanka? | KEYDMEDIA ONLINE
Danbiiluhu maku badbaadayaa baarlamaanka?
Dhamaan eedeysanayaashu, waxa ay u diyaar garoobeen ka mid noqoshada Golaha Shacabka, hayeeshee, qaadicidda Midowga musharixiinta ee natiijada doorashooyinka boobka ah, ayaa sababi karta in si guud looga hortago tallaabooyinka qorsheysan.
MUQDISHO, Soomaaliya – Sida muuqata Kooxda Farmaajo iyo Fahad Yaasiin hoggaamiyaan ee ku dhawaad shanti sano ee la soo dhaafay qaska iyo qalalaasaha ka wadday Soomaaliya, ayaa doonayasa in ay kuraas ka helaan baarlamaanka 11-aad ee JFS, si ay kaga gambadaan eedeaha ka dhan ah, waxayna durba boob xooggan ku billaabeen doorashooynkii ka dhacday Galmudug iyo Koofur galbeed.
Shakhsiyaadka ay Fahad iyo Farmaajo ugu horreeyaan, ee Kullane Jiis, Yaasiin Farey, Wadne-qabad, Cali Yare, Xijaar, Biixi iyo kuwo kale ka mid yihiin , ayay hareereynayaan eedo la xariira, khaarijinta saraakiil ka tirsan ciidanka QS, abaabulka falal amni-darro, cabburinta shacabka iyo boobka xoolaha dad weynaha, waxayna doonayaan in ay danbiyadaas uga gambadaan xasaanadda xildhibaannimada.
Qodobka 70aad ee dastuurka oo ka hadlaya Xasaanadda Xildhibaannada Golaha Shacabka ee Baarlamaanka Federaalka, ayaa dhigaya “in ayadoo aan laga haysan oggolaansho Golaha Shacabka, aan Xildhibaanka lagu qaadi karin dacwad ciqaabeed, la xiri karin, la baari karin qof ahaan, hoygiisa ama meeshii kale ee u gaar ah, haddaan lagu qaban isagoo faraha kula jira dembi sharci ahaan khasab ay tahay in laga soo saaro amar qabasho ah”.
Isla qodobkaas, wuxuu caddeynayaa, “haddii aan laga helin oggolaansho Golaha shacabka in Xildhibaanka aan la qaban karin, xabsina aan laguma hayn karin iyadoo la fulinaayo xukun maxkamadeed oo xataa kama dambays ah”.
Qodobkaas, iyo sharci gaar ah oo qeexaya xasaanadda Xilidhibaanada, ayaa kooxda Farmaajo, ku dhiiragalinaya in ay u tafaxeytaan boobka kuraasta, waxayna rumeysan yihiin in Guddoonka Goluhu, uusan ku dagdagi doonin xasaanad ka qaadista xubno ka tirsan golaha, waana sida dhaqanka soo jireenka ah sheegayo.
Sida ku cad Qodobka 64aad ee dastuurka ku meel gaarka ah, faqradiisa 4-aad, qof kasta oo noqda Madaxweynaha Soomaaliya, marka uu xilka banneeyo, wuxuu noqonayaa xildhibaan Golaha Shacaba, inta uu nool yahay, haddii aan xil-ka qaadis lagu samayn iyadoo aanay muddadii xil-hayntiisu dhammaan si waafaqsan qodobka 92aad ee Dastuurka.
Taasi waxa ay ka dhigan tahay in Farmaajo, uu qodobkaas u cuskan doono ku biiritaanka baarlamaanka 11-aad ee Jamhuuriyadda, taas oo kooxda eedeysan u suura gali karta in ay mar kale, abaabullo qorsheysan ka sameeyaan gudaha golaha, haddii aan hadda laga hor tagin natiijada doorashada boobka ah ee billowga mareysa.
Fahad Yaasiin, oo ah eedeysanaha ugu weyn kooxdaan, ayaa u diyaar garoobay boobka, Kursiga HOP86, oo afartii sano ee la soo dhaafay uu ku fadhiyay Xildhibaan Farax Sheekh Cadulqaadir, kursigaan, wuxuu ka mid yahay kuraasta taalla Baladweyne ee xarunta gobolka Hiiraan, hayeeshee, xogohu hadda caddeynayaan in loo wareejinayo midkood Jowhar iyo Muqdisho.
Yaasiin Farey, oo ka mid ah eedeysanayaasha kiiska Ikraan Tahliil oo ku maqan gacanta kooxda Fahad, ayaa Dhuusamareeb loogu boobay Kusiga HOP-067, oo Baarlamaankii 10-aad, uu ku fadhiyay Cabdullahi Cali Axmed [CADDOW CALI GEES], hadana uu masharixiintiisa ka mid yahay taliyihii hore ee NISA, Cornel Cabdiraxmaan Maxamed Tuuryare.
Kullane Jiis, oo ku heyb ah Farmaajo, kana tirsan shaqsiyaadka isha lagu hayo ee jarriimooyinka galay, ayaa dhankiisa ku sharaxan kursiga summadiisu tahay HOP040, kaas oo la filayo in Qoorqoor ugu boobo caasimadda Galmudug.
Cali Yare, Wuxuu ka mid yahay maamulka Gobolka Banaadir u qaabilsan Farmaajo, iyo shaqsiyaadka gafafka waaweyn galay tan iyo Febaraayo 2017, wuxuuna doonayaa inuu loo boobo kursiga Hop147 ee Mahad Salaad matalayay 10-kii sano ee la soo dhaafay.
Haddii loo baahdo in la maxakamadeeyo xubin ka tirsan Golaha Shacabka, waxaa eedaha loo heysto xildhibaanka guddoonka golaha u gudbinaya Xeer-ilaaliyaha guud, kaas oo codsanaya in xasaanadda laga qaabo si loo hor geeyo cadaaladda.